Nicole Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှဆုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များ - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn သို့တက်ရောက်ခြင်းအထောက်အထား
2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (Prause ဇန်နဝါရီလ, 2015 ကတည်းကတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ) တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူမလည်းသုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကယခင် UCLA ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးအပါအဝငျအခွားသူမြားပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ)
သူမနိုးထနေသောအချိန်များကိုသူတစ်ပါးအားအနှောင့်အယှက်ပေးနေစဉ် Prause သည်ပါးနပ်စွာပျိုးထောင်ခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား - သူမကခဲ့ကြောင်းဒဏ္thာရီ “ သားကောင်” porn ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံး (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏ပုံသဏ္groundာန်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်) ။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများကိုတန်ပြန်ရန် YBOP သည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (ထပ်ဆင့်ဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်)
စအဦး၌ Prause အပေါ် post မှအတု username များများစွာအလုပ် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, Quora, ဝီကီပီးဒီးယား, ထိုအတွက် မှတ်ချက်အပိုင်း ဆောင်းပါးများအောက်မှာ။ ချီးမွမ်း ခဲသူမ၏အမည်ရင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များ။ UCLA သည် Prause ၏စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် (၂၀၁၅ ဇန်န ၀ ါရီလခန့်တွင်) သက်တမ်းတိုးရန်မဟုတ်သည့်နောက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
မဆိုကြီးကြပ်မှုနှင့်ယခု Self-အလုပ်ကနေလွတ်မြောက်, Prause ကဆက်ပြောသည် နှစ်ခုမီဒီယာမန်နေဂျာ / ဖြစ်မြောက်ရေးကနေ မီဒီယာ2×3ကုမ္ပဏီရဲ့သေးငယ်သောတည်ငြိမ်မှုကို "ပူးပေါင်းသူများ" သို့ (မီဒီယာ2×3သမတ Jesse ပှနျးတစ်ဦးကဲ့သို့မိမိကိုမိမိဖော်ပြထားတယ် ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူ.) သူတို့အလုပ်သူတို့ ရန်ဖြစ်ပါသည် နေရာအရပ်ဆောင်းပါးများ စာနယ်ဇင်းအတွက် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အခြားနေရာများတွင်လူအများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုက်ဘာနှောင့်ယှက်မှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ Gary Wilson (ရာနှင့်ချီသောလူမှုမီဒီယာမှတ်ချက်များသည်နောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ) ဖြစ်သောကြောင့် Prause ၏တွစ်တာနှင့်ပို့စ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူမ၏သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်းသည်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည်။ မှတ်ချက်။ ။ ဤစာမျက်နှာ၏လအနည်းငယ်အတွင်း Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်.
ဒါဟာမကြာခင်မှာ Prause ရဲ့ tweets နှင့်မှတ်ချက်များကိုလိင်သုတေသနမှ neuroscience, သို့မဟုတ်သူမ၏အခိုင်အမာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားမည်သည့်ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. မရှိသလောက်ဖြစ်ကြောင်းသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Prause ရဲ့ပို့စ်များ၏ကျယ်ပြန့်အများစုနှစ်ခုထပ်အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်:
ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုသွယ်ဝိုက်ထောက်ပံ့ခြင်း (1, 2, 3): အသရေဖျက်မှု & ကြော်ငြာ hominem သူမက "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" (မကြာခဏကဤပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏သားကောင်ဖြစ်ဟုဆိုကာ) အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထားမှတ်ချက်။ ဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5.
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများတိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု:
အဆိုပါ FSC တိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှု (အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း), AVN (အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်း), ညစ်ညမ်းထုတ်လုပ်သူများ, အဆိုတော်, သူတို့၏အစီအစဉ်များ
ညစ်ညမ်းသုတေသနနှင့်ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုများသို့မဟုတ် porn သုတေသီများအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုများပြည်နယ်၏မရေမတွက်နိုင်သောမှားယွင်းစွာတင်ပြ။
Prause 2016 တက်ရောက်ခဲ့သည်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား။ အဆိုအရ ဝီကီပီးဒီးယား,
အဆိုပါ XRCO ဆုပေးပွဲအမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူများ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး ထိုသို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဓာတ်ပုံများတွေ့မြင်နှင့်ဤအတွက် 2016 XRCO ဆုအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည် AVN ဆောင်းပါး။ ဆောင်းပါးမှ:
၃၂ နှစ်မြောက် XRCO ဆုပေးပွဲပြပွဲတစ်ခုကတခုခုရှိမယ်ဆိုရင်ပြသနာကဘယ်လိုပါတီလုပ်ရမယ်ဆိုတာမမေ့သေးဘူး။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကြီးမားဆုံးသောမီးချောင်းများ၏အဓိကကန့်သတ်ချက်သည် OHM ၏နိုက်ကလပ်အား Hollywood & Highland ရှုပ်ထွေးသောနေရာတွင်ထုပ်ပိုးပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်း၏ပျော်ရွှင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်စွမ်းရည်နိမ့်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမတိုင်မီကအခမဲ့လှသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ခေတ်ကာလအတွက်စစ်မှန်သောအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်သည်
XRCO site တွင် ၂၀၁၆ ဆုပြပွဲကို“အရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းသောဖြစ်ရပ် - လက်မှတ်မရှိပါ - ပရိသတ်များမရှိပါ - ၀ င်ခွင့်သည်တံခါးဝတွင်သို့မဟုတ်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည်။"
porn စက်မှုလုပ်ငန်းသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ XRCO မှာ Prause ၏နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံ:
အဆိုပါ 2016 XRCO မှာကောင်းသောကြိမ်:
တစ် ဦး မှာချီးမွမ်း ကြိုတင်စာရင်းပေးထားသောဇယား ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းသူငယ်ချင်းများနှင့်:
ဒီ Watch 20 မိနစ်တွင်ဗီဒီယို 2016 XRCO ဆု (တော်တော်များများဆန်သော) ၏။ 6: 10 အမှတ်အသားပတ်ပတ်လည်တွင်ကြယ်ပွင့်၏သူငယ်ချင်း Melissa Hill နှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုတွင်ထိုင်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုမြင်နိုင်သည်။
UPDATE: အထက်ဖော်ပြပါ ၄ နှစ်အရွယ် XRCO ဆုဗီဒီယိုကိုဖျက်ပြီးမကြာမီတွင်ဖြစ်သည် ဒီ YBOP စာမျက်နှာ။ သံသယဖြစ်စရာဘာမှမရှိဘူး၊ ဗီဒီယိုကိုဖယ်ရှားရန် Prause က XRCO မှတာဝန်ရှိသူများအားတောင်းဆိုခဲ့ပါသလား။ XRCO ကသူမကိုကူညီခဲ့သလား။ နောက်ဆုံးတွင် 2016 XRCO သို့တက်ရောက်ခြင်းသည်အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည် item ကိုဟီလ်တန်အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံကို။ သတိပြုရန်မှာ XRCO ၏ဆုဗွီဒီယိုကို Diana Davison မှတုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့်မူလကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Davison အားတရားစွဲဆိုမှုအားခြိမ်းခြောက်ပါ (Davison က Prause ကို 2016 XRCO Awards တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်သည်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ )
သူမက XRCO ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့လိမ်ညာခဲ့တယ်၊ သူမကသူမရဲ့ရုပ်ပုံကိုမြင်ဖူးသူတွေကိုတရားစွဲဖို့ခြိမ်းခြောက်နေတယ်။ ဒါ့အပြင်လူတွေဟာသုတေသနလုပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ခြင်းတွေအတွက်လုပ်နေတာလို့မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း။
- Diana Davison (@ d2davison) နိုဝင်ဘာလ 25, 2019
သူမ၏ tweets မှသည်ကြောင့် Prause အဆိုပါလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်ထားပြီးပုံ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲ:
၂၀၁၅ ဇွန်လတွင် Prause က Jeanne Silver ၏ (ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တစ် ဦး) ၏ဇာတ်လမ်းကို“ AVN ၌” ကြားနာခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုသတင်းအတွက် Google ရှာဖွေရေး အများအားဖြင့် AVN ဆုပြန်လည်ရောက်ရှိ; ဒုတိယ AVN ကုန်စည်ပြပွဲ) ဖြစ်ခဲ့သည်။
PornHarms Trolling, Prause အခမဲ့တီရှပ်များကမ်းလှမ်း သူနှင့်အတူ trolls ဆန္ဒရှိအခြားသူများ။ အဆိုပါတီရှပ်များ၏တစ်အရသာမရှိသောပျက်လုံးများဖြစ်ကြသည် FTND porn ချစ်ခြင်းမေတ္တာတီရှပ်များဦးသေဆုံး။ အဆိုပါ3ဆုရရှိသူ porn ကြယ်ပွများမှာ!
အပြာကြယ်ပွင့် (Avalon) သည်သြစတြေးလျမှဖြစ်သည်။ သူမက Prause ကိုသူမကိုတီရှပ်တင်ပို့ရန်မှာအလွန်ဈေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည်“ AVN” ရှိသူ၏တီရှပ်ကိုကောက်ချင်သလားဟု Prause က Avalon ကိုမေးသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုသတင်းဆုပေးပွဲတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် အရွယ်ရောက်ဗီဒီယိုသတင်းအတွက် Google ရှာဖွေရေး အများအားဖြင့် AVN ဆုပြန်လည်ရောက်ရှိ; ဒုတိယ AVN ကုန်စည်ပြပွဲ) ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောယုတ္တိနိဂုံးချုပ် Prause AVN ဆု, အ AVN Expo, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးမတက်ရောက်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Avalon အဆိုပါ AVN မှာအံ့သြဖွယ်အချိန်ရှိသည်ဖို့ Prause ပြောပြသည်။
ထိုအပေါ်နှင့်ပေါ်မှာနီကိုးလ် Prause နှင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတတ်၏။
က FTND, ဒါမှမဟုတ်အခြားမည်သူမဆိုလျှင် Prause တစ်ဦးနှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးပညာသင်နှစ်တွေးမိအံ့သောငှါမဆိုအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း porn တက်ရောက်သူအများတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အမည်များနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားတဲ့သူ FSC, မှတစ်ဆင့်လေ့လာမှုဘာသာရပ်ရယူခဲ့သူ, LA ကတှငျနထေိုငျသူမြား, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့ခဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏ စက်မှုလုပ်ငန်းဆုအခမ်းအနားအဘယ်သူလူသိရှင်ကြားကမ်းလှမ်းခဲ့သည် (နှင့်လက်ခံခဲ့သည်) ထားပြီးအဆိုပါ FSC အားဖြင့်ထောက်ခံမှု, ဖြစ်စေခြင်းငှါ, သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းများက?
ထပ်မံ၍ Prause သည် FSC သို့မဟုတ် "porn industry" မှတိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေရရှိသည်ဟုမည်သူကမှမပြောဆိုပါ။ စင်စစ်အားဖြင့် FSC သည်ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များကိုတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ၊ ၎င်းတို့ကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ ကိုပြု မတည်ရှိ။ မဟုတ်သလိုမည်သူမဆို Prause ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါသည် "အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်"သို့မဟုတ်", သူ့ကိုယ်သူညစ်ညမ်းထင်ရှားခဲ့ပါသည်"သူမမဟုတ်မမှန်သူမ၏အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက်အခိုင်အမာနှင့်အက္ခရာများရပ်တန့်နှင့်မှသူမ၏တုန့်ပြန်၌ရှိသကဲ့သို့ ဒွန်ဟီလ်တန်သည် MD အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအမှားယွင်းသောအခိုင်အမာမှတ်တမ်းတင်ကဏ္ဍများ:
အောက်တိုဘာလ, 2016 - Prause သူမ၏ spurious အောက်တိုဘာလ, 2015 "အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်" ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအက္ခရာ။ Wilson က Prause ၏ရှေ့နေအားမိမိစာတစ်စောင်ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်။
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - အတုအယောင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများနှင့်လူများအားတိတ်ဆိတ်စွာချီးမွမ်းပါ
မေလ, 2019: Prause သရေဖျက်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း se နှုန်း Donald ဟီလ်တန်, MD ဆန့်ကျင်အတုအယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ပြောဆိုချက်ကိုနှင့်အတူတရားစွဲဆိုမှု
ဇူလိုင်လ, 2019: Donald ဟီလ်တန်မှားယွင်းစွာသည်သူ၏အထောက်အထားများတိမ်ဒေါက်တာဟီလ်တန်စွပ်စွဲ, Prause, ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့9သည်အခြားသားကောင်များအနေဖြင့်ကျမ်းကျိန်လွှာထည့်သွင်းရန်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု amends ။
နောက်ဆုံးသတင်းများ - Prause သည်သူမသည် XBIZ ၏ဆု (အကြိမ် ၁၀၀၀ ကျော်) သည် (XRCO ဆုများ) တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။ သူမ၏တွစ်တာများသည်အမျိုးသမီးရေးရာဂျူလီဘင်ဒယ်လ်အား XRCO ဆုများတက်ရောက်သည်ဟုမှားယွင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်
context: ဂျူလီဘင်ဒယ်သည်ထင်ရှားသောညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ပြည့်တန်ဆာဆန့်ကျင်ရေး၊ အစွန်းရောက်အမျိုးသမီးရေးဝါဒီဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းတင်အဖြစ် Hilton ၏အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံကိုပယ်ချရန် Prause ၏ပျက်ကွက်သောအဆိုပြုချက်တွင် သူမ၏ဆန့်ကျင်မှုနှင့်ဤ site ရှိယခင်ကဏ္sectionsများသည် Prause သည်မည်သည့်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆုမဆိုတက်ရောက်ဖူးခြင်းမရှိဟုအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းသူမလိမ်နေတယ်။ နီကိုးလ်ပရပ်စ်သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆုနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်ဟူသောအထောက်အထား။ Prause သည် 2016 သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား စက်မှုလုပ်ငန်း၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး အဖြစ်။ အရ ဝီကီပီးဒီးယား, အဆိုပါ XRCO ဆုပေးပွဲအမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူများ အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး ထိုသို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved စက်မှုလုပ်ငန်းဆုကိုပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါတွစ်တာနှင့်ပုံတစ်ဒါဇင်ကျော်ပုံများရှိသော်လည်း Prause သူမသည်သူမ XRCO သို့မတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုသည် (ငြင်းဆန်။ မရသောသက်သေအထောက်အထားများနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါသူသည်မုသာစကားကိုနှစ်ဆတိုးသည်)
In PornHub ထောက်ပံ့အောက်ပါချည် NoFap ကိုတိုက်ခိုက်တာ၊ @BrainOnPorn (Prause) သည် Julie Bindel ကိုပစ်မှတ်ထားသော XBIZ ဆောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့သည်။ RealYBOP က Julie Bindel သည် XRCO သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရဲရင့်စွာရင်ဆိုင်ရသောမုသားဖြစ်သည်။ Bindel သည် (အထူးသီးသန့် XRCO နှင့်မတူဘဲ) အများပြည်သူအတွက်ပွင့်လင်းသော XBIZ ဆုများကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ စိတ်မကောင်းစရာမှာ RealYBOP ၏တွစ်တာတွင်သူမ၏မုသားကိုဖော်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး Bindel သည် XBIZ ဆုကိုဆွတ်ခူးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ RealYBOP (Prause), Ley နှင့် JamesF သည်အသရေဖျက်မှုအဖွဲ့အဖြစ်မည်သို့အလုပ်လုပ်လေ့ရှိကြောင်းကိုလည်းသတိပြုပါ။
RealYBOP ရဲ့တွစ်တာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပေးဖို့ဖြစ်တယ် မမှန်သော Julie Bindel အပါအ ၀ င် XRCO ဆုများ (porn-anti feminists အပါအ ၀ င်) မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ အလွယ်တကူလိမ်လည်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လွယ်ကူစေသည်။
လပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက် Prause ဟာသူမရဲ့ပုံမှန်အကောင့်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရသည် (@BrainOnPorn) သည်ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အမြဲတားမြစ်ထားသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် Prause ကဇာတ်ကြောင်းကိုညှိပေးသည်။ သို့သော် Bindel ၏လူသိရှင်ကြား XBIZ ပွဲသို့တက်ရောက်သူများမှာအနီရောင်သမင်လေးဖြစ်သည်။
ယခုဗားရှင်းအသစ်သည် XBIZ ဆုကိုအကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် (!) မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခံရသည်။ ထို“ စွပ်စွဲချက်များ” မဖြစ်ခဲ့ပါ။ “ စွပ်စွဲချက်များ” အားလုံးသည်သူမ၏သီးသန့် porn-industry XRCO ဆုများသို့တက်ရောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။
သူမအသုံးပြုသည့်ထူးဆန်းသည့်စကားကိုသတိပြုပါ -ငါသွားဖို့လက်မှတ်တွေခဲ့သည်။“ မူကားညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကိုပဲဖိတ်တာ၊"ဒီသည်အဘို့အစစ်မှန်တဲ့ပုံပေါ်X-Rated ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်းဆု.
မင်းရဲ့ကလေးကညစ်ညမ်းတဲ့အရာနဲ့ထိတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုပေမယ့် "ဘယ်တော့လဲ" ဆိုတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ငါတို့ထိုင်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်နဲ့ ... t.co/uWBP6EkRlc
ဒေါက်တာ Foubert နဲ့ငါခဏလောက်နပန်းဖြေခဲ့ဖူးတဲ့ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းအချို့အကြောင်းငါပြောနေတယ်။ ဥပမာ - ညစ်ညမ်းမှုက chan ကိုလျော့ကျစေနိုင်လား ... t.co/lxJHj1HYyL